Maleeshiyaad kawada tirsan Qabuura Galeenka oo qarka u saaran in ay G/gaduud ku dagaalamaan iyo Horjoogayaal oo Guriceel dib ugu laabtay. | Halganka Online
Maleeshiyaad kawada tirsan Qabuura Galeenka oo qarka u saaran in ay G/gaduud ku dagaalamaan iyo Horjoogayaal oo Guriceel dib ugu laabtay.
Posted on Maarso 21, 2010 by halganka
Xiisada colaadeed oo u dhexeeya maleeshiyaad kawada tirsan Qabuura Galeenka ayaa laga daremayaa degmooyin dhaca gobalka G/gaduud waqti ay laba garab u kala jabanyihiin qabuura galeenka.
Wararka nagasoo gaaraya C/waaq iyo Dhuusamareeb ayaa xaqiijinaya in xiisada colaadeed ay laba Qabuura galeen ka dhax ooganyihiin kadib markii ay gobalka dib ugu laabteen saraakiil Qabuura Galeenka ah oo Addis Ababa kasoo laabtay.
Wararka laga helayo G/gaduud ayaa xaqiijinaya in laba Maleeshiyo ay isku hor fadhiyaan degmada Balanballe kuwaasi oo la sheegay in ay isku khilaafsanyihiin Heshiiskii Qabuura galeenka iyo dowlada KMG ah ku dhaxmaray magaalada Addis Ababa.
Sidoo kale Maleeshiyaad kala taabacsan Qabuura Galeenka Garabka Guriceel iyo Garabka C/waaq ayaa galabta isku rasaaseeyay wadad isku xirta C/waaq iyo Dhuuamareeb.
Wararka ayaa sheegaya in Maleeshiyo taabacsan Xeefow ay rasaas ku rideen Maleeshiyaad kasoo jeedo C/waaq oo qalabkii ugu dambeeyay ka raranayay Guriceel waxaana jira Khasaara dhaawac ubadan oo gaaray Maleeshiyadii geediga aheed ee C/waaq kusii jeeday.
Maleeshiyo ay leeyihiin dadka deegaanka Balanballe balse taabacsan Heshiiskii Addis Ababa ayaa la sheegay in ay is hor fadhiyaan Maleeshiyaad kale oo C/waaq kayimid oo doonaysa in ay Balabal la wareegto waxaana jira xiisad halkaasi ka taagan waloow ay Ciidan Itoobiyaan ah qayb ka joogaan Balanballe.
Dhinaca kale wafdi ka kooban 20 Xubnood oo katirsan Qabuura Galeenka Mushrikiinta ah ayaa dib ugusoo laabtay Guriceel kadib markii ay kasoo qayb galeen shirkii Addis Ababa ee lagu Heshiisiiyay Dowlada KMG ah iyo Qabuura galeenka.
« Mooryaan Xeeffow oo beeniyey in uu waxka saxiixay wadahadaladii Itoobiya Ciidamo Tikree ah iyo Shirkado Shidaal Baaris ah oo qabsaday qaybo katirsan degmada Galdogob gobalka Mudug. »